नयाँ पार्टीको नाम तत्काल परिवर्तन गर्न एमाले–माओवादीलाई बिप्लबको चेतावनी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिब आफु रहेको बिप्लबको दावी !
काठमाडौं । फागुन ८ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले गएराती पार्टी एकताको खाकासंगै नयाँ पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी रहने गरी गरेको निर्णयको नेत्र बिक्रम
विप्लबको नेपाल बन्दको मध्यम प्रभाब, एक दर्जन बिप्लबका कार्यकर्ता पक्राउ, काठमाडौं उपत्यकाको अवस्था कस्तो छ ?
काठमाडौं । फागुन ८ । नेत्र विक्रम चन्द बिप्लबले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आब्हान गरेको नेपाल बन्दको प्रभाब मध्यम परेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांस
ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको ४०० प्रतिशत हकप्रद छुट्याे कि !
काठमाडौं । फागुन ८ । ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक (GRDBL) को चार सय प्रतिशत हकप्रदमा आवेदन गर्ने मंगलबार (फागुन ८ गते) अन्तिम दिन रहेको छ । बैंकले हकप्रदमा
एमाले–माओवादी पार्टी एकताको लागि नितिगत बिषयमा सहमती, संगठनको बिषयमा थप छलफल गरेर एकता गर्ने, के के छ सहमतीमा ?(सहमतीपत्र सहित)
काठमाडौं । फागुन ८ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिच पार्टी एकिकरणको लागि प्रारम्भीक सहमती भएको छ । नितिगत बिषयमा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी
बिहेको भोजमा खान पकाउने ग्यास पड्किदा १८को मृत्यु भएको छ । यो घटना भारतको पश्चिमी राज्य राजस्थानमा भएको हो । वैवाहिक भोज चलिरहेका वेला एक्कासी भएको
प्रजातन्त्र दिवशको दिनमा मेयरकै अप्रजातान्त्रिक अभिब्यक्ती, आफ्नो बोली रेकर्ड नगर्न चेतावनी
काठमाडौं फागुन ७। प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी रहेका मेयरलेनै आप्mनो अभिब्यक्तिलाई रेकर्ड नगर्न चेतावनी दिएका छन् । सोमवार प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा भोजपुरको सामुदायिक भवनमा आयोजना
भक्तपुरका शाखा अधिकृत चुडामणि चापागाईं सेवाग्राहीबाट ४ लाख घुस लिँदालिँदै पक्राउ
काठमाडौं फागुन ७। भूमिसुधार कार्यालय, भक्तपुरका शाखा अधिकृत चुडामणि चापागाईं सेवाग्राहीबाट ४ लाख घुस लिँदालिँदै पक्राउ परेका छन् । उनलाई भ्रष्टाचार विरुद्ध राष्ट्रिय अभियान नेपालको सहयोगमा अख्तियारले
महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका ३ पाटु मोडमा सिन्धुलबिाट फर्कदै गरेको बस दुर्घटना
काठमाडौं । फागुन ७ । महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका ३ पाटु मोडमा सिन्धुलबिाट फर्कदै गरेको बस दुर्घटना हुँदा १० जना घाईते भएका छन् । बसमा ४० जना जन्ती
काठमाडौं । फागुन ७ । अबैध रुपमा बित्तिय कारोबार गरी ९ करोड ९७ लाख ७९ हजार ६ भन्दा बढी रकम संकलन गर्ने इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका ८ सञ्चालक
राप्रपा(राष्ट्रवादी) द्धारा प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा सुभकामना व्यक्त
काठमाडौं । फागुन ७ । प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा राप्रपा (राष्ट्रवादी)ले सम्पुर्ण नेपालीहरुमा सुभकामना व्यक्त गरेको छ । राप्रपा (राष्ट्रवादी)का अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले आज बिज्ञप्ती प्रकाशीत गदै
मधुमेह (सुगर) रोगीले खानै पर्ने १० खानेकुरा !
काठमाडौँ, फागुन ७ गते । रगतमा चिनीको मात्रा बढि हुने भएकाले मधुमेह रोगीले जे पायो त्यहि खानेकुरा खानु हुँदैन । यो एक दीर्घ रोग भएकाले रोगीले खाना
काठमाडौँ, फागुन ७ गते । फागुन ७ अर्थात् प्रजातन्त्र दिवस । ६८ वर्ष पहिले १०४ वर्ष निरङ्कुश जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो
काठमाडौं । फागुन ७ । किशोरावस्था पार गर्दै गरेका युवाहरूको प्रेमप्रतिको भावना समेट्दै नवप्रतिभा मिस्टर ओ.(ओमुक)ले आफ्नो पहिलो गीत सार्वजनिक गरेका छन्। म टोलाई.....म टोलाई...बोलको लोक पप
नेपाल टेलिकमको गजबको अफर, रु २५ मा ६० मिनेट कल गर्न र डाटा चलाउन पाउने, यसरी पाउनु हुने छ यो सुविधा
काठमाडौं । फागुन ७ । प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा नेपाल टेलिकमले फ्रिडम प्याक अफर सार्वजनीक गरेको छ । नेपाल टेलिकमले आइतबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै कम्पनीका जिएसएम र
सवारी दुर्घटनामा वडाअध्यक्षको मृत्यु, दुर्घटनामा अर्का एक वडा अध्यक्ष सहित तिन घाइते
काठमाडौं । फागुन ७ । चितवनको शान्तिचोकमा हिजो साँझ भएको सवारी दुर्घटनामा परी वडा अध्यक्षको मृत्यु भएको छ । चितवनको रत्ननगर नगरपालिका ३ शान्तिचोकमा सवारी दुर्घटनामा
काठमाडौं । पुस ६ । धुमधान तरीकाले विवाह गरेका विवाहीत नवदम्पती मध्य दुवै महिलानै भएमा के होला ? यस्तै भएको छ । त्यो नेपालमा नभई भारतमा
फागुन ६, २०७४ लामो रस्साकस्सीपछि नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी ठूला नेताहरू मिलेर एउटा कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने निर्णय गरे। कुरो राम्रो हो। अहिले नै यसका बारेमा
काठमाडौं । फागुन ६ । आमाको उपचार खर्च कतैबाट नजुटेपछि एक किशोरीले आफुलाई बिक्रीका लागि अनलाईनमा राखेपछी-पढ्दा पढ्दै आशु झर्यो.. सबैले एकचोटी पढ्नुहोला ..सेयर पनि गर्नुहोला ! बढि
काठमाडौं । फागुन ६ । कुनै महिला जब पुरुषसँग प्रेम सम्बन्धमा हुन्छिन् उनमा बदलाव आउँछ नै । हुन त केटीलाई बुझ्न कसैले पनि सक्दैन पनि भनिन्छ तर
काठमाडौं । फागुन ६ । पाकिस्तानको एक अदालतले शनिबार एक व्यक्तिलाई फाँसीको सजाय दिएको छ । सो अदालतले ती व्यक्तिलाई चार पटकसम्मको फाँसीको सजाय सुनाएको थियो ।
काठमाडौं । फागुन ६ । नेपाली समाजमा १८ बर्ष पुगेपछि अधिकांशको प्रश्न हुन्छ, विवाह कहिले गर्ने ? विवाहित कि अविवाहित ? केटी हेर्नुभएको छ ? यो तपाई
लेखापरीक्षणमा खर्चको बिल भरपाइ जुटाउन नसकेपछि सचिवहरुको भागाभाग
काठमाडौं । फागुन ६ । सरकारले तोकेको वार्षिक सञ्चालन खर्च ४ लाखबाट बढाएर साविकका गाउँ विकास समितिका सचिवहरुले थप रकम खर्च गरेको खुलासा भएको छ । लेखापरीक्षणमा खर्चको
सामुदायिक सेवा मञ्चको स्वर्ण सम्मान सम्पन्न
अशोक तिवारी । काठमाडौं । फागुन ५ । राजधानीको स्वयम्भू क्षेत्रमा रहेको सामुदायिक सेवा मञ्च, सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र स्वयम्भूले प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालको प्रमुख आतिथ्यमा
भारतमा १६ बर्ष चौकीदारी पेशा गरेका नेपालका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री भन्छन् “मेरो जस्तो दिन युवाले भोग्न नपरोस भनेर राजनीतिमा आए”
काठमाडौं । फागुन ६ । केन्द्रीय सरकार जस्तै प्रदेश सरकार पनि धमाधम निमार्ण भइरहेको छ । प्रदेश नम्बर ७ को मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त त्रिलोचन भट्टले शनिवार शपथ
वडा अध्यक्षका कक्षा एक मा पढने छोरा अपहरणमा
काठमाडौं । फागुन ६ । अपरीचित समुहले एक जना वडा अध्यक्षको कक्षा एकमा पढने छोरा अपहरण गरेका छन् । मायादेवी गाउँपालिका ४ का वडाध्यक्ष फत्ते मोहम्मद मुसलमानका
Pages 489 : You are at page 384 of 489